Media NP – Page 233 – Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०३, २०७५१३:०२0
एजेन्सी, ३ जेठ । बलिउड अभिनेता इरफान खान हिजोआज लंडनका आफ्नो बिमारीको उपचार गराइरहेका छन् । यस्तो बेला उनका फ्यानहरु उनको स्वास्थ्यबारे थाहा पाउन निक्कै उत्सुक छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै उनले बल्ल दुई
एकल इन्जिनका विमान सञ्चालनबारे प्रश्न: यात्रु ओसार्न प्रतिबन्ध लाइयो, तर किन उडानमा प्रतिबन्ध लाइएन ?
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०३, २०७५११:१२0
बिकट पहाडी भूबनौट भएको नेपाली आकासमा एकल इन्जिन भएका विमानमा प्राविधिक गडबडी भएमा आपतकालीन अवतरण जोखिमपूर्ण हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। एउटा मात्र इन्जिन भएको मकालु एयरको हवाई जहाज सिमिकोट नजिकै दुर्घटनामा परेपछि त्यस्तो खाले विमानको
ज्याकलिन दोस्रो पटक सलमानसँग रोमान्स गर्दै, भन्छिन् ‘म जे छु सलमानकै कारण छु’
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०२, २०७५१६:०४0
भारत, २ जेठ । बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डेज पुनः सलमानसँग दोस्रो पटक पर्दामा बलिउड अभिनेता सलमान खानसँग रोमान्स गर्दै छिन् । पहिलो पटक २०१४ मा रिलिज भएको ‘किक’ फिल्ममा सलमानसँगै देखिएकी ज्याकलिन अब फेरि १५
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०२, २०७५१५:०५0
काठमाडौँ, २ जेठ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले कर्मचारी समायोजनका विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । ट्रेड यूनियनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई सञ्चालन गर्न बनाईएको ऐनको मस्यौदा, समायोजन
काठमाडौँ, २ जेठ । नेपालमा यातायात क्षेत्रको 'सिन्डिकेट अन्त्य' घोषणा गरिएको दुई हप्तामा करिब ५० वटा यातायात समितिहरू मात्र कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। त्यसअघि ११८ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा अधिकांश नयाँ
भारतमा डुंगा दुर्घटना, ३० बेपत्ता, १२ को उद्धार, खोजी कार्य जारी
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०२, २०७५११:३०0
काठमाडौँ, २ जेठ । भारतको आन्द्र प्रदेशमा रहेको गोदावरीमा डुंगा दुर्घटना हुँदा कम्तिमा ३० जना बेपत्ता भएका छन् । मंगलबार साँझ तीव्र गतीमा हावाहुरी चलेकाले डुंगा दुर्घटनाभएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । डुंगामा करिब ५छ जना
चलचित्र पत्रकारिता सम्मानबाट दयाराम पाण्डे र ध्रुव लम्साल सम्मानित हुने, लक्ष्मण सुवेदीलाई पुरस्कार
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०२, २०७५१०:५९0
काठमाडौँ, २ जेठ । यस वर्षको चलचित्र पत्रकारिता सम्मानबाट वरिष्ठ पत्रकार दयाराम पाण्डे र ध्रुव लम्साल सम्मानित हुने भएका छन् । बुधबार राजधानीमा बसेको चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको बैठकले उनीहरुलाई चलचित्र पत्रकारिता सम्मानबाट सम्मान गर्ने
काठमाडौँ, २ जेठ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महसंघले वृहत राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । बुधबार राजधानीको होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजित सम्मेलनको ‘आर्थिक सामाजिक सम्बृद्धिको आधार, स्वदेशी रत्न आभुषणको विस्तार’ भन्ने नारासहित
काठमाडौं, २ जेठ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ । पार्टी एकताको विषयमा निर्णय लिन आज एमालेले स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४
काठमाडौँ, २ जेठ । चितवन जिल्लाको फरक फरक गाउँका दुई चेपाङ बालबालिकाले हालसालै भागेर विवाह गरे। बालक १५ वर्ष, बालिका १४। किन यति छिट्टै बिहे गरेको? 'हामी दुवैलाई एकअर्का मन पर्‍यो। मैले 'हिँड्!' भनेँ अनि उसलाई ल्याएँ,' ती